Fitantanam-pitondrana · Febroary, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Febroary, 2018
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Febroary, 2018
Japana: Mahazo Fanohanana Avy Amin'ny Tanàna Japoney i Obama
Amerika Avaratra 28 Febroary 2018
Mitombo ny fientanam-po anatinà tanànan'ny mpanjono matoritory ao amorontsirak'i Japana. Nahazo jery tsy mahazatra ny tanànan'i Obama, izay midika hoe "morontsiraka kely" amin'ny teny Japoney, noho ny fifanojoan'ny anarany amin'ny anaranà mpifaninana iray ho filoham-pirenena Amerikana.
Moldavia, Tiorkia: Ny Kinanga Niainan'i Natalia Morar Tao Amin'ny Seranam-piaramanidin'i Istanbul
Nanoratra tanaty bilaogy i Natalia Morar, mpanao gazety iray izay noroahan'ny mpiandry sisintany tao Rosia rehefa naparitaky ny gazetiboky Rosiana iray ny tantarany, mikasika ny fanodinkodinana vola be navoaka nankany ivelany nataon'ireo manam-pahefana ambony tao amin'ny firenena.
Eoropa Atsinanana : Lahatsary Maneho Fa Mihakatra Be ny Tahan’ny Fankahalàna Ny Fiarahan'ireo Mitovy Fananahana
Notanterahana ny 20 Sept 2006 tao Maosko ny hetsika farany mikasika ilay tantara mitohy ho fanoherana ny herisetra atao amin’ireo lahy samy lahy miaraka ary ny famoretan’ny fanjakana
Afrika Mainty 26 Febroary 2018
"Nifidy ho an'ny fiovana RAFITRA isika, FA TSY Filoha fotsiny"
Azia Atsinanana 24 Febroary 2018
Xu Alun, mpanao bilaogin-dahatsary mamerimberina fa "Ny marina no fahefana", nampiseho tantara mampihetsimpo an'ny ankizy telo mpitatitra arintany ao Biji, tanàna kely ao Atsimon'ny Shina, miaraka amin'ny fisoloana vava mandeha tsara eo amin'ny aterineto an'ny vondrona QQ, nitady hivezivezy eo anivon'ny mponina ny tantara, namoha ny fanahian'ny vahoaka.
Ejypta: “Fifaninanana Tsy Azo Ihodivirana Momba Ny Sary Amboarina (Photoshop) Misy An'i Mubarak
(2010) Satria nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana ny fifampidinihana Fandriampahalemana 2010 - eo amin'ireo mpitarika avy any Israely, Palestina, Jordania, Ejipta ary Etazonia - efa naneho fisalasalana sahady amin'ny vokatr'izany, sy ny fandraisana anjaran'ny filoha Mubarak (izay matetika kinendrin'ny fihetsiketsehana ao amin'ny firenena) ireo bilaogera Ejypsiana.
Lahatsoratra Mikasika Ny Jurassic : Hadalàna Nataon'Ilay Ministra Afghana Niretaka Ahiahy Momba ny “Fahamendrehana”
Azia Afovoany sy Kaokazy 22 Febroary 2018
"Malahelo aho mahita ny Mpitondra ao amin'ny Governemanta Fampiraisam-Pirenena miresaka ny fahaizana mitantana kanefa izy ireo aza manendry minisitra iray tsy ampy fanabeazana fototra."